Al-Shabaab oo ku hanjabtay iney soo wado weerar ka xanuun badan kii dhowaan ka dhacay xarunta UNDP |
Al-Shabaab oo ku hanjabtay iney soo wado weerar ka xanuun badan kii dhowaan ka dhacay xarunta UNDP
Gudoomiyaha Xarakada Al-Shabaab ugu magacaaban gobolka Banaadir Shiikh Cali Maxamed Xuseen ayaa ku hanjabay in dhowaan ay magaalada Muqdisho ka fulin doonaan weerar ka halis badan, ka qasaare badan kana xanuun badan kii dhowaan ay ku qaadeen xarunta heyadda UNDP.
Shiikh Cali Maxamed Xuseen oo la hadlayey warbaahinta taageerta Al-shabaab ayaa sheegay in Muqdisho ay ka mid tahay wilaayaatka Islaamiga ah ee kitaabka ALLE looga dhaqmi jiray kuwaasoo uu sheegay inay ku soo duuleen wax uu ugu yeeray cadowga Islaamka.
“Mudada u dhexeysa intii mujaahidiintu bedeleen taatikada dagaalka ee magaalada Muqdisho illaa hadda waxaa muuqata in gaalada uu soo gaaray jabkii ugu xumaa, hadey tahay, hantidooda, gaadiidkooda, iyo naftooda intaba, taasina waxay ku dhacday ILAAHAY fadligiisa, iyo mujaahidiinta oo bedelay istaraatiijiyadooda dagaalka oo sidii loogu talo galay u fushay” ayuu intaa ku daray Shiikh Cali Maxamed Xuseen.
Gudoomiyaha Xarakada Al-Shabaab ugu magacaaban gobolka Banaadir ayaa intaa ku daray in Muqdisho uusan ka jirin wax amaan ah, ayna tahay goob dagaal.
“Dhacdooyinkii ugu dambeeyey marka laga soo bilaabo weerarkii maxkamada dhaaquutka ee umada lagu dhacayey, xoolaheeda si xaaraan ahna loogu qaadanayey iyo kii ugu dambeeyey ee UNDP oo aheyd meesha ugu weyn ee gaaladu ka soo burqato, waxaa la dhihi karaa gaalada dhabarka ayey ka jabeen.” ayuu intaa ku daray Gudoomiyaha Xarakada Al-Shabaab ugu magacaaban gobolka Banaadir.
Shiikh Cali Maxamed Xuseen ayaa sheegay rag la mid ah kuwii fuliyey weeraradii u dambeeyey ay diyaarsan yihiin ayna meel walba oo ka mid ah magaalada Muqdisho ku weerari doonaan wax uu ugu yeeray gaalada iyo kuwa raacsan, aysana jirin meel ay uga badbaadayaan.
“Mujaahidiinta iyagaa doorashada iska leh xarumaha cadowgana sida ay u kala muhiimsan yihiin ayey u kala xulanayaan, gaalada ma yaqaanin, goorta la soo weeraraayo, meesha looga imaanayo iyo qaabka loo soo weerarayo” ayuu intaa ku daray Shiikh Cali Maxamed Xuseen.
Dhowaan ayey aheyd markii dagaalyahano hubeysan ay qaraxyo ismiidaamin ah iyo weerar toos ah ku qaadeen xarunta UNDP halkaasoo ay gudaha u galeen, waxaana weerarkaas ku dhintay in ka badan 20 ruux oo isugu jira ajaaniib iyo Soomaali u shaqeynayey UNDP, kooxihii weerarka fuliyey iyo dad shacab ah.